Izinyathelo Ezimbili Eziyiphutha zikaHillary Clinton - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Izinyathelo Ezimbili Eziyiphutha zikaHillary Clinton
Posted on January 14, 2015 by UGary Ruskin
Njengoba umkhankaso ka-2016 uhlangana, kuyathakazelisa ukubuka abazongenela izinkomba mayelana nepolitiki yabo yokudla. Kuze kube manje, uHillary Clinton wenze izinyathelo ezimbili ezingezona.
The Wall Street Journal kubika iqembu likaClinton eliqashile UWendy Clark, iphini likamongameli omkhulu ku Coca-Cola. Njengoba isizwe sethu silwa nomqedazwe wokukhuluphala ngokweqile, thayipha isifo sikashukela sesi-2 nezinye izifo ezihlobene nokudla, asidingi umphathi omkhulu waseCoke ehlebela indlebe yentandokazi yeDemocratic. Futhi ICoca-Cola inikeze imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 5 kuClinton Foundation.
Izinkulumo zibalulekile futhi. NgoJuni 25, 2014, uClinton unikeze i- ikheli eliyisihluthulelo ku-Biotechnology Industry Organisation, futhi empeleni kuvunyelwe izitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo. Yena utshele isixuku se-biotech: "Ngivuna ukusebenzisa imbewu nemikhiqizo enerekhodi eliqinisekisiwe, usho, futhi kuyatholakala ngokwesayensi ukuqhubeka nokuzama ukwenza leli cala kulabo abangabazayo."
Kuze kube manje, amaqabunga wetiye asikisela ukuthi i-Ready For Hillary nayo isho ukuthi Ukulungela iMonsanto kanye ne-Obesity Lobby.
Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla Bio, Inhlangano Yezimboni Ye-Biotechnology, I-Clinton Foundation, Coca-Cola, Hillary Clinton, Monsanto, UWendy Clark